I-Mujjo iphucula enye inqaku iimeko zayo ze-iPhone 13 | Ndisuka kuMac
I-Mujjo iphucula enye inqaku kwiimeko zayo ze-iPhone 13
UJordi Gimenez | | Izixhobo, iPhone
Kudala sisebenzisa kwaye sibona amacala ka Mujjo kwi I'm from Mac enye yengxaki kwezi covers (ukuba singazifumana) ibikukuba emazantsi abezi ukukhusela iphone. Ngale nto sithetha ukuba ukhuseleko lwezigqubuthelo ze-Mujjo lugqwesileyo kwimveliso yesikhumba kunye nokuba banokugqiba okugqwesileyo, kodwa emazantsi njengoko ubona kwimifanekiso yecala elifanayo kodwa kwi-iPhone 11 Pro Max, abazange bakhusele ezantsi.
U-Mujjo ngokuqinisekileyo uyaluphucula ukhuseleko ngezi iimeko ezintsha ze-iPhone 13 kwaye ekugqibeleni wongeza ukhuseleko olupheleleyo kwisixhobo, nakule ndawo isezantsi. Ngoku kaMujjo "Iimeko zeWalethi yesikhumba" kunye "neemeko zesikhumba" zongeza olu khuseleko olude lulindelwe ngabasebenzisi abaninzi.
1 I-Mujjo inika umgangatho kumaqweqwe ayo
1.1 Ukukhuselwa akuhambelani noyilo oluhle
2 Uluvo lomhleli
I-Mujjo inika umgangatho kumaqweqwe ayo
Ngokwam ndingatsho ukuba iimeko zikaMujjo zikunika loo mvakalelo yokuthwala i-iPhone phantse ngaphandle kwetyala, makhe ndichaze. Kukho iimeko kwimarike ehambisa imvakalelo yetyala elikhulu kwisixhobo (esele sikhulu) ngoko xa ubamba i-iPhone ibonakala inkulu. Ngalo mqondo, zonke i-Mujjo igubungela izibonelelo imvakalelo yokuthwala i-smartphone ngaphandle kwetyala kwaye ngakumbi kwiimodeli zamva nje ze-iPhone 12 kunye ne-iPhone 13 ngenxa yobume kunye noyilo.
Umgangatho wamaqweqwe awunakuphikiswa. Akuqhelekanga ukufumana amaqweqwe kwimarike ukuba khusela ngendlela echuliweyo kodwa esebenzayo iPhone yethu, nangona kuyinyani ukuba asiyotyala abo banemisebenzi enzima okanye kwiindawo ezintsonkothileyo.
Ukukhuselwa akuhambelani noyilo oluhle
Ngaphakathi kwezigqubuthelo zifakwe kwi-feeva ukukhusela umva wesixhobo. I-Apple yongeza izinto ezifanayo ngasemva kumatyala asemthethweni abazithengisayo kwiivenkile zabo, ke oku akunakuthetha ngenye indlela ukuba sijongene nesixhobo esifanelekileyo ukukhusela i-smartphone.
Eyona nto ingcono kukuba uyilo lwala matyala luphucule kakhulu kule nguqulo ye-iPhone 13 kwaye kukuba bongeze isiqwenga setyala emazantsi abo. Ewe, isenokubonakala ingaqhelekanga into yokuba sonwabe kakhulu ngale ndawo isezantsi yamaqweqwe kodwa yaba inxalenye ebalulekileyo ukukhusela kwi iPhones kwaye ifunwa ngabathengi Mujjo ixesha elide.
Uyilo lweekhava kunye nomgangatho wezinto ezenziwe ngazo zihlala zibalaseleyo, kule nto azitshintshanga nantoni na. Ulusu lwezigqubuthelo zeMujjo lukumgangatho ophezulu Kwaye njengakwezinye iibrendi ezidumileyo, iApple ngokwayo inokuzisayina. Akukho nto itshintshileyo kule nto kwaye siyaqhubeka sisonwabela umgangatho ofanayo kwiimodeli ezintsha njengakwixesha elidlulileyo.
I-Mujjo yintsingiselo yomgangatho macala onke. Ungafumana amaqweqwe e-iPhone, iMac kunye nezinye izixhobo zeempawu ezahlukeneyo kodwa ukuba uyakhetha, uqinisekile ukuba abayi kukuphoxa ekubeni bobabini. ukugqiba kunye nemathiriyeli zigqwesile. Ngapha koko, kwa-Mujjo abazinikelanga kuphela kumatyala e-iPhone, banamatyala eeMacs zethu, iigloves ezichukumisayo ebesithetha ngazo kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo kunye nezinye izixhobo.
Zombini iimeko zeMac kunye ne-iPhone esikwazile ukuzivavanya zikumgangatho ophezulu, kwaye ziyafikeleleka ngesikhumba esisemthethweni se-Apple. Ikhompatimenti yokongeza ikhadi letyala, ilayisenisi yokuqhuba okanye into enjalo inomdla ngokwenene kwaye ibonakala ngathi yimpumelelo, kodwa ingxaki ngolu hlobo lwamakhava kukuba ngokwengqiqo ilahlekelwa ukuhambelana neMagSafe. Oku kwimeko yam akuyongxaki kuba ndikhetha ukuphulukana nentlawulo ye-MagSafe kodwa ndikwazi ukuthwala inqaku le-euro epokothweni yam kunye nekhadi lesazisi okanye okufanayo. Akunjalo kuzo zonke iimeko ke ukuba awufuni ukuphulukana neMagSafe sicebisa enye. uhlobo lwe-mujjo holster.
€44,90 a €54,90
I-Wallet yesikhumba i-Mujjo
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iimveliso ze-Apple » iPhone » I-Mujjo iphucula enye inqaku kwiimeko zayo ze-iPhone 13
Kwividiyo: Ingaphakathi le-AirPods 3. Kukho iiyantlukwano kunye nabanye
13 × 10 Podcast: IKrisimesi iqala kwi-Apple